Church Catholic waa mid aad u fog marka la eego ku quruxsan of Mary iyo halkan waxa kale oo ka fog waxa Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay wax iyada ku saabsan.
Pope foox ku fidaa hor taallo of Mary iyo ilmaha Ciise.
In waxbaridda rasuulladii iyo Axdiga Cusub aan ka bixin wax baridda in la horumariyo agagaarka Mary, ka dibna waxaan u cayimi karta sida unbiblical.
Cilmigaygu wuxuu leeyahay xididdadiisa caabuda jaahilka ah Queen samada
Sidaa darteed, waa cilmiga ah in dhimirkiisu helay oo waa in si cad loo muujiyo. Waxaa jira taariikhda iyada oo cibaadada ah ee dhaqamada kala duwan iyo Occultism ah "Queen jannada". celin fog dib u ogan karo xaaskiisa Nimrod ee, Semiramis. Lahaanshaha iyadii u keenay ina Tammuus, waxay u bixisay labada boqoradda Samooyinka iyo hooyo diin ah. (1 Tirintii 10:. 8-9).
Just magaca "boqoradda samada" waa Church Catholic ah, magac la siiyaa Mary. Marka aad markaas u arkaan oo dhan Sidaana of Mary iyo ilmo yar, sidaa darteed waa suuraddii Nimrod ayaa xaaskiisa iyo wiilkiisa nuqul oo ka mid ah.
Fikradda ilmaha gudamodern ayaa ku noolaa ee dhaqamada kala duwan. kala iibsiga nidaam in Church Catholic ah ayaa aaminsan in saynisyahano qaar ka degay 300-qarnigii iyo waxa uu ku dhashay Masar halkaas oo ay Isis sujuudeen oo wiilkeedii Horus. muuqashadii waa duwanyihiin. Eeg sawirka.
In New Encyclopedia Britannica The, waxaad qaadan kartaa arrimahan soo socda: "xurmayn hooyada Ilaah heshay markii Church Christian ku noqday [Roman] kaniisad boqortooyadiisa hoos Constantine iyo dadka aan Yuhuudda ahayn in tacsida huleeshay galay kiniisadda. ... waxay taqwada iyo miyir diinta lahaa kumanaan sano waxaa qaabeeyey cibaadada of 'Hooyada Great' iyo 'bikrad rabaani ah', horumarinta a keentay asalkiisu ka soo diimaha dad jir ah oo Baabuloon iyo dalka Ashuur. "
Halkan, waxaan ka arki kartaa meesha cibaadada this ilaahadda hooyadiis ka soo diimaha jaahilka soo degay, in aan waa erayga Ilaah, laakiin ka jaahilnimada. Kaliya xaqiiqada waa in ay indhaha furta, iyo darfihiisa in la caabudo Maryan,
Miyeesan Catholic ayaa sheegay in Mary waa ka badan oo dhan, laakiin Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in Ciise yahay: "Waxay kuwa awowayaasha leh, oo ah kii Masiixu u yimid oo aadane ah, oo ka weyn oo dhan, Oo Ilaah baa barakeeyey weligaaba. Aamiin. "Rome. 9 5.
Tani waa mid aad u cajiib ah oo sheegay in Church Catholic waxa uu barayaa lid ku ah Kitaabka Quduuska ah - this mid ka mid ah waa in ku filan inuu ka tago kaniisadda this. Intee in le'eg oo aad isku daydo inay qariyaan waxa si cad, waxa kaliya isku day Quudin si rabin ama aan ka arki kartaa waxa iska cad in ay goob-jooge ah ka baxsan in kaliya is barbar waxa Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay iyo waxa Church Catholic waxa uu barayaa.
Ma aha dhaleeceyn doonayaan, sida qoraal this, waa in rajada ah in dadka ka tirsan this kaniisad oo kale Christian isagoo indhihiisu furan yihiin. Ma waxaad u tukaday Maryan, Ilaah weydiisanaya denbi dhaaf.
Ciise ayaa ugu jawaabay, "Waa qoran tahay, Rabbiga Ilaahiinna ahu uu idin caabudi doonaan iyo isaga keli ahaantiinna waxaad ugu adeegi doontaan." Luuk. 4: siddeedaad
Tukanayay oo Maryan u yahay waxbaridda ah unscriptural
waxaan soo saari lahaa wax walba oo miyeesan says ku saabsan Mary, waxaan jeclaan lahaa in ay door biday in ay boos weyn waxaa loogu talagalay. Waxaa la samayn karo iyada oo aan in aan ka heli doono taageero sheegashada in Kitaabka Quduuska ah, ka dibna waxaan ku aadan qalbiga ha ku qabsan this. Waxaan u baahanahay halkii u noqon on call in 1 Corinthians. 4: 6. "Waayo, inaad barato qaanuunka markuu inoo yimaadoba ma in laga gudbo waxa Qorniinku ka sheegayo."
Haddii aad tagto Axdiga Cusub barayay mid helaa oo dhan ma loo aaneeyey inay u Mary. Annagu ma heli mar kasta in rasuulladii baray Mary Catholic Church falaa. Sidaas daraaddeed waxaannu ku diidi waxbarista sababtoo ah ma ay aasaasay on Kitaabka.
waxbaristii ay yihiin kuwo aan in qarniyadii ugu horeeyay. Waxaa keliya ka dib markii dhowr boqol oo sida ay bilaabaan inay u soo baxaan, Golaha Nicaena in 325, ka dibna Efesos 431 baddalayaa Mary aadanaha ee hooyada u ah Ilaah. Kolkaasay ku tidhi helo magacyo kala duwan förebedjerska, gabadh bikrad ah oo joogto ah, aan dembi lahayn, nådeförmedlerska iyo wada-dibugato.
Church Catholic waa mid aad u dheer marka la eego ku quruxsan of Mary iyo halkan waxa kale oo ka fog waxa Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay wax iyada ku saabsan. In cutubka 969 ee miyeesan Catholic ah ayaa sheegay in this: "Tani waxay hooyada of Mary si nimcada bilaabay ogolaansho siisay in iimaanka ugu Annunciation iyo wixii ay shaki la'aan u iishay iskutallaabta. Markii ay jannada kor uma, iyadu waa inayan wax ka tagay shaqada madax furashada. Waxaa sii wadi doonaa oo aan la dhexgelin ilaa dhammaan Featured kaamil kaga dhigay weligood. Iyada oo ay shafeeco kala cayncayn ah ayay naga afgembiyaa hadiyado badbaadada weligeed ah .... Sidaa darteed Virgin ku barakeeyo la baryo sida Advocate, hodana, caawiyo si daadi iyo gaadhsiin godka. "
Arrintan waxa u sabab Mary "uu shaqada madax furashada." Waa Ciise, Ciise oo keliya, ayaa howlgalka badbaadinta. Waxa uu leeyahay Catholics in Mary sidoo kale waxa ay leedahay. Tani waa add-on an in waxa erayga Ilaah leeyahay.
this barbar dhigtaa fariin cad Ilaah: "Ma jiro badbaadada, iyo Samada jiro magac kale oo dadka ay u marayo taas oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno." Falimaha Rasuullada 4:12.
Ujeedadu waxay isku noqon kartaa si fiican u baxsan waxa Qorniinka odhan aad odhan: "Sidaa darteed gawraco Virgin ku barakeeyo" Ciise na baray sida loo tukado: "Oo wax kasta oo aad magacayga waan samayn doonaa in, in Aabbuhu waa in lagu ammaanay in Wiilka. "John. 14:13. Waxaa ka dib markii Ciise tilmaamaha, ma Church Catholic ee qaabkii, oo waa in aanu raacno marka aanu ku baryayaaye.
Mary waxa uu ku dhashay oo aan dembi lahayn sidoo kale dheeraadka ah ayaa lagu samayn Church Catholic ah, Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in dadkii oo dhammu way wada dembaabeen (Rooma. 3:23). Tan waxaa lagu sheegay sida dhawaan sida sanadkii 1854th uu aamino a
Weli ka dib, kiniisadda lagu qabtay in Mary ayaa samada loo qaaday, jidhka iyo nafta, waxanu uga dhex dhaceen 1950 Maalinta All Saints 'garoomada ka dibna Pope Pius XII, baridda Church Catholic ee gelitaanka Mary ee xagga samada. Waxaa la abuuray caqiidada soo socda si Mary: "Virgin adkaysta, isagoo ku dhameystay isaga kooxdiisana nolosha dunida, jidhka iyo nafta galay ammaanta jannada."
Waxaan leenahay document ay ka muuqato Pope ee ku dhawaaqidda ee 1950 iyo waxa si gaar ah xusid mudan in Supplement si toos ah lagu sameeyo ka dib markii waxbariddan cusub aasaasay sida cilmiga Catholic ayaa sheegay in soo socda ee ku saabsan qof kasta, "si iskood ah ku dhici lahaa inuu diido ama shaki aannu u qeexay, ka uu u sheegay in uu si buuxda u iimaankii ka rabaani ah oo Catholic dhacay. "
Haa, mid waa la yaabay hanjabaad iyo caddeeyo ruuxa Pope halkan sameeyo ka dib markii in cilmiga this aasaasay, oo aad markaas ka rabbaaniga ah iyo iimaanka Catholic dhacdeen. Marka hore, ma jiraan wax iimaanka rabaani ah, waxa aan la heli karin in ereyga Ilaah, sidaas daraaddeed sidaas darteed waa halkii yahay mid kasoo horjeeda, in ay ka carshiga rabaani ah ayaa dhacday, haddii mid ka mid ah xaqooda cilmiga this, sharciga ee 1950. Taasi mid ka dhici doona iimaanka Catholic waa halkii loo gudbiyo sida calaamad caafimaad aan la xadgudbay, oo aan absconds caqiidooyinka unbiblical, taas oo Kitaabka Quduuska ah na ugu baaqaysaa in la sameeyo.
Waayo, Catholic, kuwaas oo ay Iimaan u saaray ee kaniisadda, waa inay noqoto adag hanjabaad kuwani ma aqbali barashada aadanaha this. Waxaa laga yaabaa in waxa ay taasi aad u cabsi in ay aaminsan yihiin in this oo ay ku hadhaan kaniisadda this, ka dibna si fiican u bayaankan le'daan helay inuu si ay dadka ku xidhaan xitaa dheeraad ah si ay this kaniisadda iyo waxbaristii unbiblical.
Catholic ah, fasax la this aad tahay, u dambidhaaf warsan iyo kulmaan jeclaadaanna injiilka iyo xoraynta caafimaad iyo xorriyadda xagga Ciise Masiix.
Salaadda Maryan waa unbiblical
xarunta Mary ee Church Catholic waa mid aad u dhab ah oo ay tahay wax aad u xun ayaa ah in this obscures Ciise, Wiilka Ilaah, Badbaadiyaha dunida. Waxa oo ku saabsan 400 sano kadib markii Church Christian bilaabay maalintii Bentakostiga in Maria waxaa ka bedelanayso adigoo nin caadi ah oo leh howlgalka rabbaaniga ah, u sameeyaan boqoradda samada, iyo magacyo kale oo dheeraad ah u noqdaan.
Waa laga nidaam ah in xeerkii Mary iyo Sidaana ilmaha ku faafin galay Church Catholic ah.
Tani waa caado in baxday qarniyo badan ee Church Catholic ah. Sidaa darteed, amar ma jiro kan for dhaqan aadanaha this. Our iimaan Christian wuxuu ku salaysan yahay maamulka Kitaabka iyo cilmiga rasuullada, kaas oo iftiiminaya uuga Maryan by ay ka maqan. Sidaa darteed, waxaan geesinimo naga waxbaristii ay ku saabsan Mary xoreeyn karaan.
Church Catholic waxay bilaabeen inay weecasho yar ka waxbarista Kitaabka ee ku yaala goobahan. Waa in ay jiid line a in laamaha off ka line toosan fog ka soo jeedo waxay noqon doontaa, ayaa in ka badan line in jiidaa. Sidaas waxa uu ahaa la baridda on Mary ee Church Catholic ah.
Tani ma aha qoraal ah inuu xukumo Catholics shaqsi. Waxaad koraan dhaqan sida of Church Catholic ah, waa ay fududahay in la tiray si khalad ah cilmiga this. Tani waxay ku qoran waxaa laga arki karaa sida qalab lagu Catholics in ay jebiyaan qabin this bartaan oo ay la kulmaan jihada oo dhan Ciise, mid ka mid ah Badbaadiya, oo sidaas waa in aan Ilaah ka baryaynaa.
Waa murugo in aan ogaado in Church Catholic waa kaniisad la waxbaristii unbiblical dhowr, mid ka mid ah taas oo ah nidaam Maryan. Dhab ahaantii, siyaabo badan, Mary loftier ka badan wiilkiisa, Ciise, ayaa sheegay in this wax walba oo ku saabsan sida qaldan aad ka heli karto.
Ma aha oo kaliya in ay noqon dulqaad ecumenical iyo naxariis daahir ah ha hab dhimirkiisu this of Maria bypassed. Waxaan leenahay xoriyadda hadalka iyo in aan u isticmaali karno si ay u caawiyaan Catholics in ay ka dheeryihiin duruusta caafimaad qabin oo ku saabsan Mary iska hesho.
Waxa aynu halkan ku soo qoray oo ku saabsan Church Catholic ah waa koorso kasta inuu sameeyo sidan. Dhab ahaantii waa in Church Catholic iyo waxbaristii ay ahaayeen, marka iska cad inuu u muujiyo. Sidaas daraaddeed iska cad in dugsiyada qiyaastii boqol sano ka hor oo qayb ka ah waxbarashada caruurta dugsiga. Intee ka sii badan ma aha in qaabka kiniisadaha in ay aan cad oo ku saabsan waxa Church Catholic ah waxay u taagan tahay, halka ka dibna in buugaagta gobolka dareemay in ay tani qayb ka mid ah waxbarashada dugsiyada noqon lahaa.
Waxaan soo qaadan doonaa buugga taariikhda Fatherland ee C. T Odhner. buugaagta waxa loo adeegsaday muddo tobannaan sano qaar badan oo loogu talagalay waxbarashada caruurta dugsiga. Sidaas waxay sharaxeysaa iimaanka Catholic ah lahaa oo ka jirta ka hor inta la Wanaajiyey ka of Caqiidooyin Catholic iyo hay'adaha: "rumaysad The Christian oo lagu wacdiyey awowayaashayo, ma ay diinta kiristaanka ee saafiga ah, sida in ay jiraan waxaa la soo saaray Qorniinka ka, laakiin waxbaridda Catholic. Tani waxa ay ahayd inta lagu guda jiro waqti noqdaan qaso hindisooyin badan aadanaha. Waxay keligay ma caabudeen Ilaaha Saddexmidnimada ah, laakiin sidoo kale, waxaana laga yaabaa xitaa ka sii badan, "Hooyo Ilaah" (Virgin Mary iyo quduusiinta Ie, kuwa Eebe ka dhawrsada. Dadka uu dhintay ka dib noqday mid ka fiirsaday sida xurmada leh oo caabuday ILaahyo. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in Pope of Rome yahay Masiixa taliyaha dhulka iyo Church oo dhan Rabbiga, Sidaa darteed amarradiisa oo dhan ku addeecdaan, oo loo yeedhay "Aabbe Quduuska ah". Haddii qof ay dhicin inay ka soo horjeeda, oo uu ku ciqaabay la ogsoonaa, ie laga saaray xidhiidhka kiniisadda cibaadada iyo sacraments ah. "End quote Odhner.
Haddii article tani waa muhiim of Church Catholic ah, waa mid ka mid sax ah. Dhab ahaantii, dhaleeceynta waa wax fudud marka la barbardhigo waxa nin Ilaah taariikhda oo dhan ayaa. Ma aha qof kasta waa ogyahay in magacyada weyn sida Wyckliff, Huss, Luther, Calvin, Melanchthon, Knox, Tundale, John iyo Charles Wesley dareemay in Papacy waa dhilladii weynayd sida ku cad Revelation, cutubka akhrin 17. Waxaa ku hadla Ilaah xukunka dhillada ah.
Qaar badan oo ka mid ah Protestant kiniisadaha sidoo kale ka mid this in qirashooyin ay. Sida aynu in aannu mar iska eafiya iskana karaa? Sida aynu ku isbahaysiga tegi karaa Catholic dhaqdhaqaaqa ballaaran ecumenical aawadiis? Waxaa la joogaa waqtigii noo qashinka dhammaadka wakhtiga, fahmi nimadu of horreeyay our lahaa iyo sidoo kale rumaysanahay our tanaasul.
Waxaan u baahanahay inaan Eebe iyo Word adeeca badan ha aamuso iyo aqbalaan kiniisadda la waxbaristii ay unbiblical. Sidee kale waxaan dhihi karaa waxaan rumaysan nahay in ereyga Ilaah iyo u malayn in kaniisadda tani waa mid ka mid ah oo dhan kaniisadaha kale oo kaliya?
Vecka 30, fredag 30 juli 2021 kl. 14:35